Hay’adda Nabadsugida oo ku soo bandhigtey Afgooye dhalinyaro lagu eedeynayo Alshabaab
Updated About:219 days ago 0
Hay’adda nabadsugida ayaa ku soobandhigtey degmada Afgoye saddex wiil oo dhalinyaro ah oo lagu eedeynayo inay ka tirsanaayeen ururka Alshabaab.
Taliyaha nabad sugida Gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg oo saxaafada kula hadlay Degmada Afgooye ayaa sheegay in dhalinyaradaani ka tirsanaayeen ururka Alshabaab laguna qabtay qaarkood iyagoo bistoolado wata.
Soo qabashada wiilashan dhalinyarada ah ayaa imanaysa kadib markii xalay lagu diley magaalada Afgoye labo ruux oo ganacsato ah oo iibin jirtey qaadka halka habeen horena lagu tuuray bam gacmeed saldhiga booliska magaalada Afgoye.
Ururka Alshabaab oo ka baxay deegaano badanoo kamid ah gobolka Sh/hoose ayaa u bedelay qaabka sida tooska uu dagaalada ula geli jirey ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada mid ah dhuumaalaysi iyo qaraxyo.
Boqolaal dhalinyaro oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka Alshabaab ayaa ku jira xabsiyada dowlada hase ahaatee lama maqlo dhalinyaradaa oo maxkamad la horgeeyo lana xukumo.